HERBICIDE "HURRICANE FORTE": TILMAAMAHA ISTICMAALKA HARAMAHA - SOOSAARKA DALAGGA
"Hurricane Forte": tilmaamaha loogu isticmaalo dhulka beeraha
Burburinta dhirta weelka leh ee gargaarka ilbaxeedyada maanta waxay ku haboon tahay meelaha ballaaran ee ujeedada beeraha, iyo qulqulka guryaha ee dalka.
Sida loo isticmaalo mukhaadaraadka noocan oo kale ah, sida loo isticmaalo si sax ah, tixgelin tusaalaha "Dhirta" Hurricane Forte ".
"Hurricane Forte": sharaxaad
"Hurricane Forte" waxaa lagu gartaa hab nabadgelyo leh bey'adeed, awood u leh waqti gaaban si looga saaro goobta haramaha, xitaa adagtahay in la raro. Nidaamka cusub ee karinta cuntada ayaa kuu ogolaanaya inaad wax ka qabato cayayaanka ugu badan ee u adkaysta: qamadajirta, beerista yamaariga, qulqulka. Waa ku filan in la shaqeeyo barkad ama xagaaga xagaaga bilowgeeda xagaaga iyo ilaa iyo xilliga dayrta ku saabsan cawska la illoobi karo. Herbicide ayaa si dhakhso ah u dhaqdhaqaaqa mana faddaraynin ciidda, ma aha halis ah cayayaanka, taas oo ah, waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro xilliga pollination by bees. Herbicide waxaa loo isticmaalaa marka la nadiifiyo dhulalka geedaha iyo geedaha. Macnaheedu waa si dhakhso ah loo buufinayaa, loo qaybiyaa goobta codsiga oo keenaya natiijooyin.
Ma taqaanaa? Haramaha badani waa kuwo la cuni karo oo xitaa aad waxtar u leh, maadaama ay ku jiraan antioxidants iyo waxyaabo badan oo fiitamiin ah iyo waxyaabo faa'iido leh. Tusaale ahaan, løvetann, cagajugleyn, burdock. By habka, burdock ee Japan waxaa loo arkaa ah khudradda buuxa, salad, maraqa, suxuunta ugu muhiimsan waxaa laga diyaariyey.
Maaddooyinka firfircoon iyo habka waxqabadka
Maaddada ugu muhiimsan ee ka kooban hal-abuurka waa glyphosate. Xalka, ku dhacaya caleemaha dhirta, si tartiib ah u galaan unugyada oo dhan, xannibaya geedi socodka nolosha. Sidaa awgeed, weelku waa ka baabi'i doonaa gudaha.
Baro nafaqooyinka kale: Ground, Titus, Lapis, Reglon Super, Agrokiller, Lontrel-300.
Calaamadaha ugu horreeya ee soo-saarka cagaarshowga waa la ogaan karaa laba maalmood ka dib marka la shaqeynayo - cawsku waxay noqdaan huruud, caleemaha caleemaha, dhirtu ma jiidi karto nafaqooyinka ka soo baxa ciidda. Ugu dambeyntii, dhirta ku dhinto 14-15 maalmood. Xaaladaha ugu habboon ee "Duufaan" si loo xakameeyo haramaha - hawo diiran, hawo qoyan oo dhexdhexaad ah.
Tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka "Hurricane Forte" ayaa sheegaya in qalabku yahay mid ku habboon ilaalinta dhirta beeraha. Tixgeli faa'iidooyinka muhiimka ah ee geedka:
Waxtarnimada daroogada ayaa u oggolaanaysa daaweyn yar si joogta ah, kaas oo badbaadinaya qalabka laftiisa iyo waqtiga;
Herbicide waxaa lagu nuugaa saddex saacadood gudahood, haddii ay dhacdo roobabku waxtarkoodu hoos uma dhicin;
Ficilku ma faragalinayo isbedel kasta ee heerkulka ama abaarta;
Natiijada codsiga waa la arki karaa ka dib laba maalmood;
Arjiga waa suurtagal aan lahayn xaddidaad, sida loo baahdo;
Goobta soo hagaagtay way ka yar tahay nabaad guurka, waxay ka sii fiicnaanaysaa qoyaanka.
Sida loo sameeyo daaweynta daroogada: tilmaamaha isticmaalka
"Hurricane Forte" oo ka soo horjeeda cawska sida waafaqsan tilmaamaha laguma talinayo in lagu buufiyo, haddii ay tahay dabaysha iyo qoyan, ka hor intaan la isticmaalin muhiim maaha inay beerato beerta beerta ama cawska.
Waa muhiim! Daaweyn kasta oo ciidda ah ka dib markii la dalbado geedo yaryar ayaa la sameeyaa wax aan ka horeyn todobaad ka dib, xalka ayaa loo diyaariyaa isla markiiba ka hor isticmaalka, tan iyo maalinta xigta ay lumiso hantideeda.
Si aad u diyaariso xalka u shaqeynta, qoyso qiyaasta loo baahan yahay ee litir oo biyo ah, iyo ka dib markaad isku dhafan tahay, u keen mugga aad rabto. Suurtagal maaha in la isticmaalo diyaarinta biyaha isku-dhafan ee walax kasta oo shisheeye ah. Sida loo isticmaalo "Duufaankii Duufaan" ee dhismaha, tixgeli isticmaalka iyo xaddiga lacagta ee dalagyada kala duwan:
Wixii qurxinta iyo ubaxa dhirta - 60 ml / 10 l oo biyo ah, qiyaastii saddex litir oo isku dar ah halkii mitir oo laba jibbaaran;
Cawska - 90 ml / 10 litir oo biyo ah, saddex weel ayaa lagu cunaa saddex litir;
Guga, hadhuudhka, digirta -20ml / 4 l, isticmaalka afar litir boqolkiiba;
Khudaarta, miraha, beeraha - 15 ml / 4 l, isticmaalka afar litir boqolkiiba.
Ma taqaanaa? Waxaan la yaabanahay halka laga yaabo inay ka timaaddo. Xaqiiqdu waxay tahay in qaar badan oo ka mid ah ay sameeyaan abuurka shuruudaha kala duwan. Quinoa waxaa ku jira miraha Gagaab ah isla markiiba ka dib xilliga dayrta, kooxda labaad ee abuurka ah waxay kor u kacdaa sanadka labaad iyo saddexaadna soo saartaa sprouts saddexaad. Sidaas awgeed waxay soo baxdaa saddex sano oo "hareereheeda" beeraha.
U sinaanta cayayaanka kale
Mabda 'ahaan, daroogadu waa ku haboon tahay qaab kale oo isku mid ah, laakiin waa in la eego xaaladaha qaarkood si looga fogaado dhibaatooyinka aan loo baahnayn. Isku daridda alaabooyinka kale waxay ku siin kartaa natiijo xasilloon marka loo eego iyaga si gooni ah, tusaale ahaan, isku dar ah geedaha duurjoogta ah ee Banvel leh: kiiskan, si wax ku ool ah ayuu u dhaqmaa cawska udubdhexaadka ah wuxuuna si weyn u yareyn karaa heerka isticmaalka herbicides.
Qalabka wuxuu ka tirsan yahay heerka saddexaad ee sunta. In ay ka kooban yihiin ee herbicide qadar yar oo ah walxaha sunta ah. Waa ammaan in shimbiraha iyo cayayaanka, laakiin sunta kalluunka. Nuujiyo iyo bini-aadanka, waa wax sun ah. Haddii qeyb ka mid noqoto indhahaaga markaad la shaqeyneyso badeecadda, waa inaad isla markiiba ku dhaqdaa biyo socda. Marka aad soo noqotid, isla markiiba u naaquso matag (dhibbanaha xalka daciifka ah ee manganese, biyo diirran iyo cusbo ayaa samayn doona beerta), ka dibna u tag dhakhtarka waqti dambe.
Waa muhiim! Ku shaqeynta daroogada waxaa lagu sameeyaa neefsashada iyo muraayadaha, kiis kasta si looga hortago in ilaha biyaha la cabbo.
Nolosha shafka ah ee daroogada, iyada oo la bixinayo in baakidhka hermeticku yahay 4 sano. Ku kaydi meel qallalan, oo ka soo jeeda xayawaanka, waxyaabaha, daawooyinka. Meeshu waa inay noqotaa mid aan la helin carruurta iyo xayawaanka rabaayadda ah. Kaydinta heerkulka laga bilaabo 0 ilaa + 35. Daroogadani waxtar maahan oo keliya meelaha iyo beeraha, waxay leedahay codsiyo badan oo kala duwan: cawska iyo jardiinooyinka, dariiqyada magaalada, waddooyinka, jidadka tareenka iyo waddooyinka hawada, dhismayaasha warshadaha iyo wixii la mid ah.